Sidaan ayaad xiriir ku heli kartaa | dinarattigheter
Xagee baan la xiriiraa haddii xuquuqdayda lagu xad gudbo?
Degdeg miyaa? Ka Wac booliska 112!
Markii laga reebo heerarka caawinaadda iyotaageeridda bixiya ee hoos ku xusan waxaa degmo kasta saaran masuuliyad iyo waajib ah in ay taageeraan oo caawinaan dadka dhibka lagu hayo. Waxaa kaloo suurogal ah in aad la xiriirto booliska degmadaada, xafiiska adeegga bulshada ama kalkaalisada caafimaadka /la taliyaha arrimaha bulshada ee iskuulka.
BRIS waa urur loogu tala galay carruurta dhibka loo geysto wuxuuna ka ambaqaadaa baahidooda. Adiga ilaa iyo 18 jirka ah ayaa soo wici kara BRIS, adiga oo aan sheegin qofka aad tahay oo halkaas qof weyn kala hadli kara. Marna lagama arki karo qarshka taleefankaaga in aad wacday taleefanka caawinaadda ee carruurta wicitaanka qarashkiisana waxaa bixinaya BRIS. Dadka waaweyn ee taleefanka caawinaadda waxaa saaran xilka qarinta sirta.
Taleefanka caawinaadda carruurtu waa: 116 111 bogga internetkuna waa www.bris.se
Kvinno- och tjejjourer/Heeganka dumarka- iyo gabdhaha
Heeganka gabdhaha-iyo dumarka haddii aad wacaysid waxaad dooran kartaa in aadan sheegin qofka aad tahay. Dumarka heeganka leh oo dhan waxaa saaran xilka sir qarinta.
Bogooda internetka waa: isbahaysiga heeganada dumarka heer qaran ee Swidhan www.kvinnojour.com
Ururka heer qaran heeganka dumarka iyo heeganka gabdhaha ee Swidhan: www.roks.se
Heeganka gabdhaha: www.tjejjouren.se
UMO, Ungdomsmottagning på nätet/Qaabilaadda dhalinyarada ee internetka
UMO waa bogga internetka ee qaabilaadda dhalinyarada u dhexeysa 13 iyo 25 sano.Ujeedadu bogga waain dhalinyarada loo fududeeyo iney helaan warbixin sax ah, lana hubo oo ku saabsan galmada, caafimaadka iyo xiriirka.
Qaabbilaadda Linna waxay leedahay qaabbilaad furan oo loogu tala galay dhallin yarada da’doodu u dhaxayso 13-25 sano oo loo geysto cadaadis, handadaad ama xoog u-sheegad sharaf ku salaysan. Taleefankooda heeganka leh waa: 020-40 70 40
Elektra waa urur ka shaqeeya gabdhaha iyo wiilasha ku nool caburinta sharaf dhowrka iyo dagaalka. Elektra waxay taleefoon ku caawisaa wada hadala dhinaca teleefoonka ah iyo e-mailka. Wiilasha iyo gabdhahaba waa la xiriiri karaan.
RFSL Talasiinta Skåne waxay taageero iyo talo siisaa qofka xoog loo sheegto kaas oo sharaf ku salaysan ayna sabab u tahay jinsiga uu ka helo noociisa(hadd ii uu yahay nin ka hela ama naag naag ka hesha oo kale), waxay leeyihiin taleefan heegan leh waxyna bilaabayaan koox taageerta. Boogga internetka: www.heder.nu
HBT & Heder/ Jinsiga kan lamidka ah himmada u haya iyo Sharafta
RFSL Ungdom och ALMAeuropa waxay isla wadaan mashruuc la yiraahdo ”Hbt & sharaf” kaa soo ku wajahan dhalinyarada hbt-shaqsiyeed kuwaasoo dhibaato kaga timaado dagaalka sharafdhowrka la xiriir. Mashruucu wuxuu leeyahay bog internetka ah wuxuuna kaalmo ku bixiyaa habka chat ahaanta iyo maylka.
Bogga internetka: hbtheder.se
Rädda Barnen/Ururka Badbaadinta caruurta
Rädda Barnen waa urur u dooda xuquuqda caruurta iyagoo ra’yibixi abuura kaalmeeyana caruurta xaaladaha adag ku sugan. Waa Rädda Barnen(Ururka Badbaadinta caruurta) kan gacanta ku haya boggan internetka ee aad ku jirto. Xaqada. Si xaqaada loo dhowro waxaa xitaa jira msnjour(msn heegan ah) msninaraatigheter.se iyo cinwaanka maylka: dinarattigheterr.se. . Halkanaad ka arki kartaa markuu chattku furan yahay.
Rädda Barnens centrum/ Xafiiska dhexe Ururka Badbaadinta caruurta ee xaalada qatarta ee caruurta iyo dhalinyarada
Rädda Barnen/ Ururka Badbaadinta caruurta wuxuu leeyahay xafiis dhexe ee xaalada qatarta ee caruurta iyo dhalinyarada faahfaahin dheeraada ka akhriso halkan. Haddaad rabto inaad la xiriirto Ururka Badbaadinta caruurta waxaad kala xiriiri kartaa tel: 08-698 90 00. Bogga www.rb.se waxaad ka akhrisan howlaha Rädda Barnens arbete/ Ururka Badbaadinta caruurta.
Röda korsets ungdomsförbund / Ururka dhallinyarada ee Laan Qayrta Cas
Ururka dhallinyarada ee Laan Qayrta Cas wuxuu wadaa hawlgalka la yiraahdo jourhavande kompis (saaxiib heegan ah) oo toos uga shaqeeya aaminka caruurta iyo dhallinyarada. Waa taleen heegan leh, halkaasna waxaad wici kartaa adigoo aan sheegin qofka aad tahay markii aad rabto in aad qof la hadasho. Dadka ka jawaabayaa waa dhallinyaro waxaana saaran waajib 100 boqol in ay sirta qariyaan. Jourhavande kompis: 020-222 444
Bogga internetka: www.rkuf.se
Systerjouren Somaya /Heeganka walaalaha ee Somaya
Heeganka walaalaha ee Somaya waa heegan dumar oo qibrad ka badan toban sano u leh in ay qaabilaan dumarka asalkoodu ka soo jeedo waddan kale iyo dumarka muslinka ka soo jeeda. Waxay siiyaan talooyin, taageero iyo caawinaad in ay ayagu is caawinaan oo ay ku caawinaan taleefanka heeganka ah oo furan maalin kasta 9-16. Waxay leeyihiin saddex hooy oo ammaan sugid leh (guryaha qarsoodiga lagu dego) oo mid ka mid ahi uu khaas u yahay borabaleemada sharafta la xiriira. Waxay ku hadlaan 30 luuqadood ka kor. Taleefankooda. 020-81 82 83, Bogga internetka: www.somaya.se
Tänk om/Dib uga fikir
Dib uga fikir waa urur tabaruc ku shaqeeya oo la aasaasy 2009 in uu ka shaqeeyo wacyi gelin, warbixin, dood iyo dabiibidda dadka loo geysto cadaadis sharaf ku salaysan iyo xoog u sheegasho. Khaas ahaan wuxuu ururkaani himmad gaara siiyaa asgoo ah ururkii ugu horeeyay su’aalaha quseeya u xoog sheegadka sharafeed – si xun u istacmaal balwad – dambiyo gelid – dhib isku geysiga wuxuuna soo shaac bixiyaa sida ay isugu xiran yihiin.
Ka aqriso wax intaas ka dheeraad ah: www.tankom.net ama kala xiriir 0736-98 23 82.
Qadka taleefanka xasiloonida dumarka ee qaranka
Taageero qaran iyotaleefan caawinaad oo furan habeen iyo maalin saacad kasta. Lacag la’aan baad ku wacaysaa, xaqna waxaad u leedahay in aadan sheegin qofka aad tahay. Waxaa jirta fursad ah in aad taageero ku hesho luuqado kala duwan. Waa la qarin karaa in aad booqatay boggooda internetka. Taleefankooda heegananka leh: 020- 50 50 50. Bogga internetka www.kvinnofridslinjen.se
Taleefan taageero oo xoog u sheegashada sharafta la xiriira
Taleefan talo iyo taageero ee qofkii raba inuu ka hadlo xoog-u sheegasho, handadaad iyo koontarool magaca sharafta ayadoo la adeegsanayo. Taleefanku wuxuu u furan yahay qofkasta oo dhibkaas loo geysto, qaraabada, asxaabta iyo kuwa kale oo raba in ay su’aalo weydiyaan shaqaale qibrad dheer leh. Taleefanka taageeridda waxaa masuul ka ah Gryning Vård.
Teleefon: 020 – 25 85 85 vardagar 9.00-16.00, Bogga inrenetka: mina-rs.se
Riksorganisationen GAPF – Glöm Aldrig Pela och Fadime/Ururka qaranka ee GAPF-Ha Weligaa ha hilmaamin Pela och Fadime
Weligaa ha hilmaamin Pela och Fadime waa urur aan diinna raacsaneyn ahna iska wax u qabso o oka soo horjeeda dagaalka sharaf dhowrka. Waxay kaalmeeyaan nimanka ama dumarka si uun dhibaato uga soo gaaartay xaaladahaa adag – ama quseeya dagaalka sharaf dhowrka. Haddii adiga ama qofaad taqaanno uu ay heysato dhibaatada cadaadinta sharaf dhowrka iyo dagaalka ama qatar ugu jiro in nin lagu daro, waxaad la xiriiri kartaa GAPF helina kartaa kaalmo. Wax kharash ah lagama rabo waxaad u sheegtana waa sir.
Teleefon (xafiis): 08-711 60 32 Telefon (mobayl): 070-441 10 75
1000 Möjligheter/ 1000 fursadood
1000 Möjligheter/1000 fursadood waa urur iskaa wax u qabso ah oo aaminsan dumarka xaqooda wuxuuna u shaqeeyaa in la helo bulsho siman. Ururka 1000 fursadood wuxuu muhiim u arkaa in ay muhiim tahay in laga shaqeeyo sinnaanta bulshada horey loogu wado waa in gabdhaha , wiilasha iyo kuwa isku jinsigooda u hamiya, ha noqdeen kuwa goonni isu taagga ama kuwa wadajirka ah. 1000 fursadood wuxuu ka shaqeeyaa sinnaanta si loo helo bulsho siman wuxuu qabtaa ka hortagyo iyo taakuleyn. Ma u baahan tahay qofaad la hadashid? Halkan baan joognaa siyaan kuu kaalmeyno! Waa hadli kartaa haddaad rabtol, waxaan yareyn weyneynba. Annaga waxaan nahay dhalinyaro waaweyn oo ku caawinaaya kuguna garabgalaaya waxaad rabtid. Waxan ku wada hadalno waa sir. Isniin kasta inta u dhexeysa saacaddauna tahay 19-21 och Jimce kasta saacadduna tahay 18-20 annagaad chat nala sameyn kartaa bogga.
Bogga internetka: 1000mojligheter.se
Su’aalaha wiilasha waa gole-taageero oo ku wajahan wiilasha ama kuwa dareema wiil ahaan ee jira 10-18 sano, waxay mayl ama chat kula xiriiri karaan saaxiibada wada hadalka(dad waawey oo aqoon leh si iskaa wax u qabso u shaqeya) waxay rabaan ama wax weyn ama wax yar. Fikrad ka mida fikradda waa in wiilasha iyo gabdhahuba la kulmaan rajo laga sugayo sideey bulshada ula dhaqmi lahayeen oo waxaan rabnaa inaan u noqonno meel ay wiilashu ku hadli karaan waxa la filayo wiilasha iyo in wiilsha lagu dhiiri geliyo iney sinnaanta ku dadaalaan.